Iyo yese Copa América Centenario pane yako iPhone neiyo yepamutemo app | IPhone nhau
Yese Copa America Centenario pane yako iPhone neiyo yepamutemo app
Shanduro nyowani yeCopa América yatanga mazuva mashoma apfuura (ichaitwa pakati paJune 3 na26), uyezve Concacaf akagadzirira chirongwa chepamutemo che iPhone ckwatinogona kutevera zvese zvinoitika muUnited States, nekuti zvinotibatsira isu vateveri venhabvu kuti tisamhanya mumutambo wakanaka pamberi peiyo Euro 2016 yaitarisirwa kwazvo.
2 Kushandisa nyore
Iko kunyorera kune mabhesiki ayo anodikanwa kune chero iko kunyorera kweakakosha nhabvu nhabvu kana makwikwi: karenda nezvose zvirongwa zvemitambo, mukana wekutevera edu kufarira kufarira zvakanyanya zvakasiyana, zvese zvakadzama zveboka rega rega rinotora chikamu kana kusundira zviziviso zvine chekuita nenyaya.
Uye zvakare, iko kunyorera kune nyowani ficha mumhando iyi yeapps iyo vateveri veMSQRD uye Snapchat vachada yakawanda: mafirita. Tinogona kuwana pende kumeso chaiyo yesarudzo yedu yatinofarira uye gare gare inogoverana mumasocial network rutsigiro rwedu neshamwari dzedu dzese. Yakanga iri nyaya yenguva vasati vatanga kuishandisa mune iyi mhando yezvibasa, zvakapihwa kubudirira kwezve zvataurwa pamusoro, uye heino izvi.
Iko kunyorera kunofadza kwazvo kushandisa, ine yakanyatso dhizaini ine ruvara pendi yakasarudzwa kupa mutsauko uye ita kuti kuverenga kuve nyore yeiyo data nekukurumidza, iyo inokosheswa muapp yeiyi dhizaini yatinombotarisa nekukurumidza zvakanyanya. Iyo yekufambisa kuburikidza nekushandisa iri mushe uye isina zvikanganiso, zvirinani sekusvika kune ichangoburwa chizvarwa Apple zvishandiso zvine hanya.
In the multimedia chikamu Tinogona zvakare kufamba zviri nyore pakati pemifananidzo nemavhidhiyo zvakatumirwa kubva kusangano, uye hatifanire kukanganwa kuti isu tinogona zvakare kuziva zvese zvinoitika mumakwikwi uye nechikwata chedu kana tikatevera iyo inoputsa nhau feed inoisanganisira iyo. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutaurwa kuti zvinoenderana neWallet kuti uende kumitambo neinopinda manhamba pane yedu iPhone.
Muchidimbu, ichi chinhu chakakosha kunyorera imi mese muri kuzotevera iyo Copa América Centenario kana zvirinani iwe uri kufarira kutora tarisiro yekuti makwikwi anoenderera sei mukati memazuva ese. Ehezve iko kunyorera kuri mahara zvachose uye hakune zvakabatanidzwa mukutenga chero mhando.
CONCACAF Yepamutemo Appvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yese Copa America Centenario pane yako iPhone neiyo yepamutemo app
Bose anowedzera huni kumoto: iyo QuietComforts inobvisa tambo
Chekutanga beta yeWOSOS 2.2.2 inosvika padhuze neyechipiri yeTVOS 9.2.2 uye OS X 10.11.6